YEYINTNGE(ကနေဒါ): စစ်​ကောင်စီကို အ​မေရိကန်အပါအဝင် ၁၁ နိုင်ငံက ထပ်မံသတိ​ပေး
စစ်​ကောင်စီကို အ​မေရိကန်အပါအဝင် ၁၁ နိုင်ငံက ထပ်မံသတိ​ပေး
စစ်​ကောင်စီကို အ​မေရိကန်၊ ဗြိတိန်အပါအဝင် ၁၁ နိုင်ငံက သတိ​ပေးချက်တစ်ရပ်ကို ​ယ​နေ့ ည​နေပိုင်းတွင် အောက်ပါအတိုင်းထုတ်ပြန်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လှိုင်သာယာမြို့နယ်နှင့် အခြားသောဒေသများတွင် လက်နက်မဲ့အရပ်သားများအပေါ် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ မကြာခဏဆိုသလို အမှောင်ထုကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ ရက်စက်စွာအကြမ်းဖက်ခြင်းသည် သူရဲဘောကြောင်ပြီး လူ့ကျင့်ဝတ်နှင့်မလျော်ညီသည့်အပြင် ကာကွယ်ရန်အလွန်ခက်ခဲပါသည်။
မြန်မာပြည်သူများအပေါ် အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်အားလုံးရပ်တန့်ရန်၊ ဖမ်းဆီးထားသူအားလုံးပြန်လွှတ်ပေးရန်၊ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်နှင့် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနှင့် နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာထားသည်ကို ရုတ်သိမ်းပေးရန်၊ ဆက်သွယ်ရေးကန့်သတ်ထားမှုများပယ်ဖျက်‌ပေးရန်နှင့် ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသောအစိုးရကို အာဏာပြန်လည်ပေးအပ်ရန် မြန်မာစစ်တပ်ကို မိမိတို့တောင်းဆိုပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏အခွင့်အရေးဖြစ်သော ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြခွင့်နှင့် သတင်းအချက်အလက်လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်ခွင့်ကို မိမိတို့ထောက်ခံအားပေးပါသည်။ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားခြင်းနှင့် မီဒီယာကိုနှိပ်ကွပ်ထားခြင်းဖြင့် စစ်တပ်၏စက်ဆုပ်ဖွယ်ရာလုပ်ရပ်တို့ကို ဖုံးကွယ်ထားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ဤကြေညာချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥရောပသမဂ္ဂသံရုံးနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ သံရုံးများဖြစ်ကြသော - ဒိန်းမတ်၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဖင်လန်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ အီတလီ၊ နယ်သာလန်၊ စပိန်နှင့် ဆွီဒင်နိုင်ငံ - ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတို့မှ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသံအမတ်ကြီးများက ပူးပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ပါသည်။
STATEMENT BY AMBASSADORS TO MYANMAR
The brutal violence ​against unarmed civilians by the security forces in Hlaing Tharyar and elsewhere in Myanmar, often under the cover of darkness, is immoral and indefensible. We call on Myanmar’s military to cease all violence against people of Myanmar, release all detainees, lift martial law and the nationwide state of emergency, remove telecommunications restrictions, and restore the democratically elected government. We support the right of the people of Myanmar to protest peacefully and support their right to freely access information. Internet blackouts and the suppression of the media will not hide the military’s abhorrent actions.
Signed by the Ambassadors to Myanmar from the Delegation of the EU and European Union Member States with presence in Myanmar: Denmark, Czech Republic, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Spain, and Sweden; the United Kingdom; and the United States.
BY YeYint Nge ... 3/19/2021
▼ Mar 19 (39)
ယနေ့အတွက် ထူးခြားသော သတင်း(၄)ခု ...
ကုလသမဂ္ဂ ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းရေးတပ် ဝင်ရောက်ဖ...
ညမထွက်ရအမိန့် ၈ နာရီနောက်ပိုင်း မူဆယ်အဝင် သစ်ခိုးထ...
ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရ​သော အမျိုးသား ​ခေါင်းကွဲဒဏ်ရာဖြင့်...
လွိုင်​ကော်တွင် ပြည်သူ ၁ ဦး၊ ​အောင်ပန်းတွင် ပြည်သူ...
ရိုစာနာဘီ(ခ)မအေးအေးခိုင်ရဲ့ နာ​ရေးကို ယနေ့ မတ်လ ၁၉...
မတ်လ ၁၄ ရက်​နေ့ စစ်​ကောင်စီတပ်များကျူးလွန်​​သော လှ...
သာ​ကေတမြို့နယ် ၇ ဈေး​ကျောကပ်ပတ္တမြားလမ်း‌တွင် ပစ်...
စစ်​ကောင်စီတပ်က ပြည်သူအ​ပေါ်ကျူးလွန် ဖက်ဆစ်ဆန်​သေ...
စစ်​ကောင်စီကို အ​မေရိကန်အပါအဝင် ၁၁ နိုင်ငံက ထပ်မံ...
တောင်ဒဂုံမှာ တစ်ဦးသေဆုံးပြီး ၁ ဦး လည်ပင်းကျည်ထိဒဏ...
ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ​ခွဲကျော်တန်ဖိုးရှိ ​ရေအား လျှပ်စစ်...
ကလေးမြို့ တာဟန်းရပ်ကွက် ဘရာဏီအလှပြင်ဆိုင်လမ်းကြားက...
ေါ်သက်သက်ခိုင်၏ လှုံဆော်ရေး မန် နေ ဂျာ Dr ခင်ခင်ကျော့
ရေလယ် ကျောက်တန်း ကမ်နားစျေးက ငှက်ပျောသီးတွေကို လုယ...
နောက်ထပ်အညွှန့်တစ်ညွှန့် အချိုးခံခဲ့ရပြီ နွေဦးရေ။
တောင်ငူမြို့ အမှတ် ၂ ရဲစခန်းရှေ့ တွင် အရပ်ဝတ် ရဲ မ...
အောင်ပန်းပစ်ခတ်မှုများအတွင်း ကျဆုံးသူစုစုပေါင်း ၇ ...
အာဏာသိမ်း စစ်တပ် မှ ရထားလမ်း အား ဗုံးထောင်နေခြင်း
အကြမ်းဖက်စစ်​ကောင်စီတပ်များ ပြည်သူပိုင်ကား အစီး ၃၀...
uwsaရန်ကုန်မြို့ထိ စစ်ကြောင်းတွေ ဆင်နွှဲသွားဖို့ ရှိ
အကြမ်းဖက်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ကားကို ရပ်တန့်‌စေပြီး ဆဲဆို အ...
အမေရိကန်တွေ ဝင်ကူလာမှာကို မအလ စစ်သူပုန်တွေနဲ့ သူတိ...
USA -CHINA ဆွေးနွေးပွဲအခြေအနေမကောင်းပါ
ကျည်ဆံတွေကြား အကြောက်တရား မရှိတဲ့Gen-Z မျိုးဆက်
USA-CHINA ဆွေးနွေးပွဲ တင်းမာ
ဖက်ဒရယ် ပြည်သူ့တပ်မတော်ကြီး မကြာမှီလာမည်။
စစ်ကောင်စီရဲ့ မြေပြင်လှုပ်ရှားမှုမှာ Psycho ပိုင်း...